Kobo Fixes Kobo Aura Otu na Kobo Aura Edition 2 Nsogbu Batrị | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Kobo na-edozi Kobo Aura One na Kobo Aura Edition 2 nsogbu batrị
Kobo Aura One na Kobo Aura Edition 2 bu ihe ndi edere abuo buru ibu ndi meworo otutu ndi mmadu nlebara anya na ahia ha. gị ọrụ mkpesa banyere batrị nsogbu na nnwere onwe ya.
Agbanyeghị na igbe na Kobo na-agwa anyị oge niile otu ọnwa ma ọ bụ karịa, nke bụ eziokwu bụ na ndị ọrụ na-eme mkpesa na eReader anaghị erute oge nnwere onwe ahụ. Kobo nụla mkpesa ndị a na agbanyeghị na okwughi ihe ọ bụla gbasara ya, omume gị yiri ka ọ na-egosi ọkwa eReader a.
Na nso nso Kobo emelitere ngwa ngwa maka eReaders a, inwe nomenclature 4.1.7729. Ngwaọrụ a ga-adị ezigbo mkpa maka ndị nwe nke eReaders ọhụrụ a n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ ga-edozi nsogbu batrị kama ọ ga-enwekwa ụfọdụ akụkọ dị ka njikwa zuru oke na overdrive, nke pụtara na ndị ọrụ ga-enwe ike iweghachi ebook ahụ site na eReader, na-achọghị ihe ngwaọrụ ọzọ.
Femụwe ọhụrụ ahụ agaghị emezi nsogbu batrị kamakwa ọ ga-emeziwanye Overdrive
Edoziwo nsogbu mmekọrịta yana ụfọdụ nsogbu dị adị na SSID, ihe ga-edozi nsogbu njikọ nke ụfọdụ ngwaọrụ. Ihe arụ ọrụ na-anaghị arụ ọrụ ma wepu ya na menus, ya mere ugbu a, menus ahụ dị ọcha ma na-arụ ọrụ karịa ma ọ bụrụ na ha dabara.
N'ọnọdụ ọ bụla, ruo mgbe ọ nweghị onye kwuru n'ụzọ ọzọ, ọ dị ka ọ dị mmeghari a dika ihe kwesiri inwe na eReaderMa obu Kobo Aura Otu ma obu ihe ozo, ebe obu na nsogbu a dina na ngwanrọ a obughi na ngwaike. O di nwute na nwelite a ga-eji nwayọ nwayọ, ya bu, ọ bụghị ngwaọrụ niile ga-enweta ya n'otu oge, ma ọ bụrụ na ha ga-eme ya na oge nke awa ma ọ bụ ụbọchị, ị ga-echere obere oge, ihe ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ ga-edozi nsogbu ahụ, ị ​​naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Kobo na-edozi Kobo Aura One na Kobo Aura Edition 2 nsogbu batrị
Ramses Udo dijo
Mmelite a nwere ụfọdụ chinchi, dịka ọmụmaatụ, ngalaba "Awards" anaghịzi arụ ọrụ, ọnụọgụ ọgụgụ maka akwụkwọ ọ bụla anaghịzi arụ ọrụ. Azịza Kobo nyere na-egosi na ọ nweghị mmasị na idozi ya, nke bụ: "Daalụ maka mkpesa nsogbu a na sọftụwia ahụ, anyị ebula ụzọ kwuo ya, mana azịza MAYBE agaghị abịa ruo n'afọ ọzọ (2019)" . Ahụrụ m na enweghị mmasị na ụlọ ọrụ ahụ, ọ dị ka furu efu.
Zaghachi Ramses Paz
Ndi Amazon ga-akwadebe ọhụụ ọzọ?
Ebube Harry Potter eBook na-ekpuchi